Tolona Hanakanana Ny Fanambadian’ny Ankizy Ao Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2013 13:06 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, русский, Español, Ελληνικά, Dansk, polski, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Fomba fanao mahazo vahana ao Yemen ny Fampanambadiana Ankizy, indrindra eny amin'ny faritra ambanivohitra. Niteraka adihevitra momba ity olana goavana ity ny tantaran'ny fahafatesan'ilay ankizy valo taona efa manambady.
Tamin'ny tatitra avy amin'ny Mpanara-maso ny Zon'olombelona “Nahoana no avelanao hanambady ny ankizy kely?” tamin'ny taona 2011, izay nilaza momba ny fanadihadina nasionaly notontosain'ny governemanta Yemenita sy ny Tahirin'ny Firenena Mikambana misahana ny Ankizy (UNICEF) tamin'ny taona 2006, 52%-n'ny tovovavy dia manambady alohan'ny faha-18 taonany. Eo amin'ny 14%-n'ny tovovavy ao Yemen kosa dia manambady alohan'ny faha-15 taonany. Nanamarika ny fikarohana nataon'ny Oniversite ao Sanaa tamin'ny taona 2005 fa, ao amin'ny faritra ambanivohitra sasany, efa manambady ireo tovovavy mbola herotrerony eo amin'ny valo taona eo. Ny fahantrana no antony lehibe mahatonga ny fanambadian'ny ankizy ao Yemen. Mitady hanala ny zanany vavy hiala antsekoly ny raim-pianakaviana ary matetika mampanambady azy ireo amin'ny lehilahy efa somary lehibe (antitra) mba hahazoan'ny fianakaviana tolotolotra madinidinika.
Nibahana tamin'ny lohatenim-baovao tamin'ny taona 2008 ny tantaran'i Nujood Ali, 10 taona, tanora indrindra manerantany nisaram-panambadiana, rehefa nandositra ny tokantranony miaraka aminà lehilahy izay nividy azy ho vady tamin'izy sivy taona. 15 taona i Nujood ankehitriny, miara-monina amin'ny zokiny lahimatoa, satria ampiasan'ny rainy ny vola azony amin'ny varotra boky, izay saika hiantohany ny fianarany, mba hanambadiany fanindroany indray ary hitadiavana vady ho an'ny zandriny faravavy. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fijaliana niaretany, vakio eto.
10 taona i Arwa, efa nanambady sy efa nisara-panambadiana. Niteraka adihevitra tao amin'ny firenena momba ny fanambadian'ny ankizy ny tantarany tamin'ny taona 2009.
(Lahatsary nampakarin'ny Journeyman Pictures)
Tamin'ny herinandro lasa, niparitaka tamin'ny lohatenim-baovao ny tranga nahazo ilay ankizivavy Yemenita 8 taona hafa efa manambady, namoy ny ainy izy rehefa nijininika ny rà nandritra ny alin'ny fanambadiana (nuit de noces) niaraka taminà lehilahy Saodiana 40 taona.
Niteraka fahatezerana manerantany ity tranga ity rehefa niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao:
Talen'ny Mpanara-maso ny zon'olombelona, Kenneth Roth nisioka hoe:
Tokony handresy lahatra an'i #Yemen handràra ny fampanambadiana ankizy ny fahafatesana mahatsiravina nahazo ilay “vehivavy hatao mariazy” 8 taona efa manambady nandritra ny alin'ny mariazy.
Nandrisika ny governemantan'ny tetezamita ny Mpanara-maso ny zon'olombelona ao Yemen mba hametra ny fanambadiana manomboka ny faha-18 taona amin'ny fandrafetana ny lalàmpanorenana vaovao mba hiarovana ny fahazazana sy ny ain'ireo tovovavy marobe.
(Lahatsary narakitry ny Human Rights Watch tao amin'ny Youtube)
Tamin'ny fanambarana nataony, niangavy an'i Yemen i Catherine Ashton, Solontena ambony misahana ny politika ivelany ao amin'ny Vondrona Eoropeana mba handràra ny fanambadian'ny ankizy:
Sanganehana aho nahita ilay vaovao momba ilay ankizivavy yemenita 8 taona namoy ny ainy noho ny ratra goavana, ratra anaty nahazo azy nandritra ny alin'ny mariazy. Miangavy ny manampahefana Yemenita aho mba hanadihady momba ity raharaha ity tsy misy hatak'andro ary hanenjika ireo izay tompon'andraikitra rehetra tamin'ity famonoan'olona ity
Nizara momba ity tantara ity tao amin'ny Twitter ihany koa i Nicholas Kristof, mpanoratra matoan-dahatsoratra ao amin'ny New York:
Namoy ny ainy noho ny ratra anaty nahazo ilay ankizivavy kely 8 taona tao Yémen rehefa noterena hanambady lehilahy 40 taona
Nandefa sioka ho an'ny governemantan’ i Yemen i Mia Farrow:
Taorian'ny fahafatesan'ilay zazavavy kely 8 taona “efa manambady” nandritra ny alin'ny mariazy, tokony hazava amin'i Yemen, fa tokony hofoanan'izy ireo AMIN'IZAO FOTOANA IZAO ny fanambadian'ny ankizy
Sanganehana ny mpanao gazety sady mpanolotra fandaharana ao amin'ny CNN, Jim Clancy ary nisioka hoe:
Zazavavy kely 8 taona “efa manambady” namoy ny ainy tao #Yemen. Mitondra #henatra ao amin'ny fireneny ireo mpanao lalàna
Angham, Yemenita monina ao Washington nanontany hoe :
Atao sorona mihitsy ve ny ain'ireo ankizy efa manambady tsy manan-tsiny mba hanairana ny saina fa mila fanampiana ara-toekarena i #Yemen mba hampitsaharana ny fahantrana
Mpitondra fivavahana malaza ao Yemen, Al Habib al-Jafri nisioka hoe:
Tokony hiasa mafy isika mba hanafoanana ity kivazivazu ratsy amin'ny fampanambadiana ireo tovovavy ireo.
Taminà lahatsoratra manaraka tao amin'ny Facebook, nandrisika ny governemantan'i Yemen sy ny governemanta Arabo sy ireo firenena Islamika izay tsy manana lalàna mandràra ny heloka atao amin'ireo ankizy tsy manan-tsiny izy, izay manao azy ireo ho enta-barotra hamidy eny an-tsena amin'ny alalan'ny fanambadiana feno fanandevozana, ka hanameloka faingana izao fihetsika mahatsiravina izao, ary hiasa mafy hiady amin'izany amin'ny alalan'ireo manampahefana mpanao lalàna. Ary nanentana ireo namana mpitondra fivavahana, manam-pahaizana sy mpitoriteny ihany koa izy mba handrava izao fomba izao, sady nampatsiahy azy ireo ny adidiny amin'ny fanentanana mikasika ity olana ity.
Mbola tsy fantatra ny tena marina mikasika ity tantara momba ny fahafatesana mampivarahontsana nahazo ilay ankizivavy kely 8 taona ity. Mpanao gazety Saeed Al Batati nanadihady ity raharaha ity tao amin'ny Gulf News sy tao amin'ity lahatsary ity. Na dia izany aza, na marina na tsia ity tantara ity, na koa noforonin'ny fitondrana tamin'ny fomba rehetra, tsy izany no olana. Olana goavana ao Yemen ny fanambadian'ny ankizy izay miteraka fahafatesan'ireo tovovavy marobe, mandritra ny fanambadiana na mandritra ny fiterahana -tanora niharam-boina izay tsy mba nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao ny tantaran'izy ireo. Tsy vao tantara voalohany ity ary tsy ho farany ihany koa. Ny zava-misy dia tokony hatsahatry ny governemanta ao Yemen ny fanambadian'ny ankizy.
Bilaogera Afrah Nasser nisioka hoe:
Tsy mazava amiko ny antony hanadihadiana raha marina na tsia ny fahafatesan'ilay ankizivavy kely efa manambady !! Topazo-maso fotsiny ny faritra ambanivohitra ao Yemen dia ho fantatrao.
Minisitry ny Zon'olombelona ao Yemen, Hooria Mashhour nisioka momba ity raharaha mampiadi-hevitra ity ihany koa:
Mbola ratsy indrindra noho ilay heloka ny fiarovana na fanakonana ilay heloka ary tokony hosaziana ireo izay nahavita izany heloka izany
Na dia eo aza ireo vaovao mifanipaka momba ny fahafatesan'ilay ankizy Haradh, ilaina ny lalàna manafoana ny fanambadian'ny ankizy tsy ampy taona
Nandefa taratasy ho an'ny Antenimiera ihany koa ny Minisitry ny Zon'Olombelona mba hankatò ny fetran-taona farany ambany mahazo manambady sy hampihatra ny lalàna. Tolona ao Yemen efa natomboka ela talohan'ny fanendrena minisitra ny fitakiana goavana amin'ny tokony hametrahana fetran-taona amin'ny fanambadiana sy ny handràrana ny fanambadian'ny ankizy, saingy nolavin'ny konservativa hatrany nandritra ny taona maro izany. Tamin'ny taona 1999, nofoanan'ny Antenimiera ao Yemen izay mifototra amin'ny foto-kevitra ara-pinoana ny fehezan-dalàna faha-15 momba ny sata manokana, izay nametra ny taona farany ambany amin'ny fanambadiana ho 15 taona ho an'ny tovolahy sy ny tovovavy.Tamin'ny taona 2009, nankatòavin'ny Parlemantan'i Yemen ny fampiakarana ho 17 taona amin'ny taona farany ambany amin'ny fanambadiana, saingy mbola nolavin'ireo solombavambahoaka konservativa hatrany indray ka tsy mbola voasonia mandraka ankehitriny izany volavolan-dalàna izany. Asa goavana sady mitaky fotoana lava ny fifidianana lalàna, kanefa mbola dingana voalohany handresena ny tolona izany. Fanamby lehibe ho an'i Yemen ny fankatòavana izany lalàna izany.
Dr. Jamela Saleh Alraiby, Sekreteram-panjakana ao amin'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny mponina nanoratra lahatsoratra tamin'ny taon-dasa, izay mitondra ny lohateny hoe Tsy maintsy hatsahatra ny fijalian'ireo Tovovavy (The Suffering of Girls Must Stop)
Hoy izy nilaza:
Sarotra ny ady amin'ny fandràrana ny fanambadian'ny ankizy ao Yémen satria misy fototra ara-pinoana, ara-kolontsaina ary ara-poko, saingy manome hery hatrany ho antsika izany fanamby izany mba hamonjena ireo tovovavintsika sy hampitsahatra ny herisetra mihatra amin'izy ireo, ary ny mba hananan'izy ireo fahafahana sy fitaovana hanapahany hevitra manokana, sy ny handraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana maharitra.
Ny nofinofiko ho an'ireo tovovavy dia ny hanomezana azy ireo ny fahafahany manapa-kevitra manokana. … Ny nofinofiko dia ny hananan'ireo tovovavin'i Yémen fahafahana hianatra sy mivelona ara-dalàna, tsy hiharan'ny fandrahoanana amin'ny alalan'ny fanambadiana terena kanefa mbola zaza izy.
Tokony hiara-hiasa handinika ity olana ity ny governemanta sy ny fiarahamonim-pirenena ao Yemen. Mifidy lalàna mametra ny taona amin'ny fanambadiana ary mampihatra izany sy manasazy ireo izay mandika izany, manome fahafahana ho an'ireo tovovavy mba hahavita hatramin'ny farany ny fianarany sy hiasa. Mamonjy aina maro ao Yemen ny fanatanterahana fanentanana henjana amin'ny media mikasika izany olana (fanambadian'ny ankizy) izany.